के हो ‘अब्सट्रक्टिभ स्लीप एपनिया’ र ‘रिकरेन्ट चेस्ट इन्फेक्सन’? जसले लियो ‘बप्पी’को ज्यान – Health Post Nepal
के हो ‘अब्सट्रक्टिभ स्लीप एपनिया’ र ‘रिकरेन्ट चेस्ट इन्फेक्सन’? जसले लियो ‘बप्पी’को ज्यान
२०७८ फागुन ४ गते १६:००
काठमाडौं – मंगलबार राति बलिउडका चर्चित गायक तथा संगीतकार बप्पी लहिरीको मुम्बईको सिटीकेयर अस्पतालमा दुखद निधन भयो। ६९ वर्षीय बप्पी झण्डै एक महिनादेखि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। रिपोर्टका अनुसार बप्पी अब्सट्रक्टिभ स्लीप एपनिया र रिकरेन्ट चेस्ट इन्फेक्सनबाट पीडित थिए। जसका कारण उनको मृत्यु भएको हो।
के हो अब्सट्रक्टिभ स्लीप एपनिया?
अब्सट्रक्टिभ स्लीप एपनिया एक श्वासप्रश्वास विकार हो जुन विशेष गरी रातिको समयमा हुन्छ। अब्सट्रक्टिभ स्लीप एपनियाले कुनै कारणले श्वासप्रश्वासको मार्गमा अवरोध उत्पन्न गर्छ र व्यक्तिलाई सास फेर्न कठिनाइ बनाउँछ। जसका कारणले गर्दा अचानक निद्रा खुल्छ। अब्सट्रक्टिभ स्लीप एपनिया सामान्यतया तब हुन्छ जब श्वासनलीका मांसपेशीहरू आराम अवस्थामा हुन्छन् र मार्ग अवरुद्ध गरिरहेका हुन्छन्।
अब्सट्रक्टिभ स्लीप एपनियाका लक्षणहरु
-बारम्बार निद्रबाट ब्यूँझनु
-घुर्ने समस्या चर्को हुनु
-सुतिरहेको बेला निसास्सिनु
-बिहान टाउको दुख्नु
-दिउँसो निद्रा लाग्नु (राति राम्रोसँग सुत्न नसकेका कारण)
अब्सट्रक्टिभ स्लीप एपनियाको उपचार
यदि अवस्था गम्भीर छैन भने यसको उपचारको लागि चिकित्सकहरूले जीवनशैली परिवर्तन गर्न, शरीरको तौल घटाउन र धुम्रपान छोड्न आदि सुझाव दिन्छन्। केही मानिसहरूलाई एलर्जीको कारणले पनि यो हुनसक्छ। जसलाई एन्टिहिस्टामिन औषधिहरू र सुन्निएको कम गर्न एन्टि-इन्फ्लेमेटरी औषधिहरूद्वारा उपचार गरिन्छ। यद्यपि, यदि अवस्था गम्भीर छ भने शल्यक्रिया पनि आवश्यक हुन सक्छ। जसले श्वासप्रश्वास मार्गबाट झुण्डिएको तन्तु हटाउँछ।
अब्सट्रक्टिभ स्लीप एपनियाबाट कसरी बच्ने?
स्वस्थ जीवनशैली अपनाएर अब्सट्रक्टिभ स्लीप एपनियाबाट हुने जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, नियमित रूपमा व्यायाम गर्नुहोस् र सन्तुलित आहार लिनुहोस्। जसले मोटोपना कम राख्छ। जुन मुख्य कारणहरू मध्ये एक हो। साथै, धुम्रपान र रक्सीको सेवन बन्द गर्नाले पनि अब्सट्रक्टिभ स्लीप एपनियाको जोखिमलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सक्छ।
के हो रिकरेन्ट चेस्ट इन्फेक्सन?
छातीको संक्रमण एक गम्भीर रोग हो। जसले मुख्यतया फोक्सो, श्वासपाइप र ब्रोन्काईलाई असर गर्छ। यदि छातीमा बारम्बार इन्फेक्सन हुन्छ भने त्यो अवस्थालाई रिकरेन्ट चेस्ट इन्फेक्सन भनिन्छ। छातीमा संक्रमण विभिन्न प्रकारका भाइरस, ब्याक्टेरिया वा फङ्गसको कारणले हुन्छ। व्यक्तिको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुनु वा एलर्जी हुने पदार्थको बारम्बार सम्पर्कमा आउनु पनि बारम्बार छातीमा संक्रमणको मुख्य कारण हुन सक्छ।
रिकरेन्ट चेस्ट इन्फेक्सनका लक्षण
-छाती दुख्नु वा जलन हुनु
-बारम्बार खोकी लाग्नु
-म्यूकस डिस्चार्ज हुनु
-सास फेर्न कठिनाई हुनु
-थकित महसुस हुनु
रिकरेन्ट चेस्ट इन्फेक्सनको उपचार
रिकरेन्ट चेस्ट इन्फेक्सन सामान्यतया त्यसको अवस्थाको आधारमा उपचार गरिन्छ। उदाहरणका लागि, भाइरल इन्फेक्सनको लागि एन्टि-भाइरल, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनका लागि एन्टिबायोटिक र फङ्गल इन्फेक्सनको लागि एन्टि-फङ्गल ड्रग्स प्रयोग गरिन्छ। यसका साथसाथै बिरामीले महसुस गरिरहेको लक्षणलाई कम गर्नका लागि अन्य दुखाइ कम गर्ने र इन्फ्लेमेटरी औषधिहरू पनि दिइन्छ।
रिकरेन्ट चेस्ट इन्फेक्सनबाट कसरी बच्ने?
शारीरिक सरसफाइ र सन्तुलित आहारले छातीको संक्रमणको जोखिमलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सक्छ। साथै, यदि तपाईं धुम्रपान वा रक्सी पिउनुहुन्छ भने तुरुन्तै छोड्नुहोस्। यस्तै, कमजोर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएका मानिसहरूले समय-समयमा स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ। किनभने कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली बारम्बार हुने संक्रमणको सबैभन्दा ठूलो कारण हो। यदि तपाईंलाई अब्सट्रक्टिभ स्लीप एपनिया र रिकरेन्ट चेस्ट इन्फेक्सन दुवै छ भने समयमै उपचार र ख्याल नगरे गम्भीर अवस्था निम्तिन सक्छ।